(tonga teto avy amin'ny Mormonisma)
Ny môrmônisma dia ny foto-pampianaran' ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany. Izany foto-pampianarana izany dia ahitana ny Teti-pamonjena izay misy vondron-dalàna voalamina, ordonansa mandrakizay, ireo lalàna ireo no rafitra entin' Andriamanitra mitantana ny fanjakany. Ny Olomasin' ny Andro Farany dia mino ny fisian'ny Teti-pamonjena izay ahafahan' ny olona mendrika hiverina eo anatrehan' Andriamanitra. Atao hoe "Filazantsaran' i Jesoa Kristy" ny teôlôjian'ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany. Fampianarana avy amin' ny fanambaràn' i Jesoa Kristy izay miendrika firafetan-dalàna sy didy mandrakizay izany ka ny olona izay manaraka an-tsakany sy an-davany an' izany dia mahazo antoka fa hiditra eo amin' ny fanatrehan' Andriamanitra. Ireo lalàna sy didy ireo no lamim-pitondrana ao amin'ny fanjakan' Andriamanitra. Ho voavonjy avokoa ao amin' ny Fanjakam-boninahitra ny olona rehetra fa tsy voatery ho ao amin' ny Fanjakan' ny Lanitra.
Fiezahan' ny Olomasina ho amin'ny tonga lafatra hatrany[hanova | hanova ny fango]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Môrmônisma&oldid=1011038"
Voaova farany tamin'ny 26 Aprily 2021 amin'ny 11:10 ity pejy ity.